प्रधानमन्त्रीका यी सल्लाहाकारले मानसि र ढेडुवा चिन्न छोडेछन् ! - Sidha News
प्रधानमन्त्रीका यी सल्लाहाकारले मानसि र ढेडुवा चिन्न छोडेछन् !
काठमाडौं। हालै अर्कोगुटबाट आएर कुन्दनलाई फालेर प्रमका प्रेस सल्लाहकार बनेका सूर्य थापाले आफ्नै पार्टीका गैह्र ओली नेतालाई लक्षित गर्दै फेसबुकमा एउटा स्टास लेखेका छन् जुन शाब्दिक बैचारिक र उनले पाएको ओहदाको हिसावले अशोभनीय छ । स्टासका शव्द यस्ता छन्।
मंगलबार सामाजिक संजाल फेसबुकमा थापाले लेखे, मेरो स्टाटस हो कि अरुको लेख शेयर गरेको भनेर छुट्याउन समेत नसक्ने मनुवा हु्न् कि ढेंडु र? कति असभ्य र घृणित रहेछन् एउटा लेखसम्म पढ्न औकात र हैसियत नराख्ने स्यालहरु ? छिःछि मान्छे बन्न अझै कति समय लाग्ने हो ।
प्रम बिमार भएको बेलामा प्रचण्डले बोलाएको सचिवालय बैठक उनलाई मन परेको रहेनछ । त्यतिबेला उनले पार्टि एकता नभएको भए प्रचण्ड एउटा सानो झुण्डका मात्र नेता हुन्थे भनी हिजो सोमबार नै झटारो हानी सकेका थिए ।
सूर्य थापाको हीजोको स्टाटसको जवाफमा प्रचण्डका सहयोगी मनहरी तिमिल्सिनाले अर्को सटाटस लेखे जसको बोल यस प्रकार थियो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले यति घटिया कुरा लेख्न मिल्दैन कि सूर्य कमरेड । १२ वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रामा राखे पनि बाङ्गाको बाङ्गै भनेजस्तै तपाईले कहिल्यै पार्टी एकताको मर्म स्वीकार्न सक्नु भएन । दया लाग्छ कमरेडको नियत र गतिविधि देख्दा’
भनी जवाफ लेखे । यहाँ कुरा के भएछ भने प्रचण्ड सानो झुण्डका नेता हुन्थे भन्ने कुरा सूर्यथापाले अरु कसैले लेखेको कुरा कपि गरेका रहेछन् भन्ने कुरा यहाँ राति अबेर प्रकाशित मनहरीको अर्को स्टाटसले पुष्टि गर्छ ।
‘आफै लेख्नुस् कि अरुले लेखेको अंश उद्धत गरेर शेयर गर्नुस्, पार्टी र सरकारको सम्वेदनशील जिम्मेवारीमा बसेर पार्टी एकताको स्प्रीड, भावना र सहमतिविपरित बोल्ने जो कसैसँग हाम्रो विमति रहन्छ। समाजवादी क्रान्तिको तयारीको कार्यदिशा र संविधानकै गला रेट्ने गरी गरिएका निरन्तरका दुष्प्रचार र तिकडमहरु आपत्तिजनक छन्। यस्ता गतिविधिले समाजवाद र नेकपाको होइन, पूँजीवाद र दलालहरुको मात्र सेवा गर्दछन्।’
यसरी उनले थप पुष्टि गर्दै स्टाटस लेखेका छन् ।
कुरा यत्ति हो यो पार्टि एकताबाट पदमा पुगेकाहरु ढुक्क छन् मस्त बसेकाछन् । तर तल्लो तहका आसेपासेहरुको र्‍यार ङुर व्यापक रुपमा सुनिन्छ । यस अघि विष्णु रिमालले छौडा छौडी आदि लेखेर आफ्नो औकात उदांग पारेका थिए ।
आखिर नेपालमा को नै नेता रहेछ र सवै झोले, टोले, पेटीकोटे, हुक्के बैठके त हुन् ।
यहाँका दुवै व्यक्तिहरु नेकपामा कति आैकातमा छन् भन्ने थाहा भएन तर उनीहरुकाे मनस्थिती र क्षमता फेसबुकले देखायाे ।